Tag: ahịa ojii | Martech Zone
Tag: ahịa ojii
Imirikiti ụlọ ọrụ na-ezipụ ozi-elelị na-elelị etu ihe nnyefe nwere ike isi metụta nzukọ ha. Email mara mma, nke ewuru nke ọma, ma nwee ọfụma nwere ike ịdaba na folda junk nke onye debanyere aha ma chọọ ịgbanwe na ụlọ ọrụ gị. Nke ahụ bụ ọnọdụ jọgburu onwe ya ịnọ na Nkwado m maka nke a bụ ndị mmekọ anyị na
N'afọ gara aga, anyị na ụlọ ọrụ mba na-arụ ọrụ na mgbagwoju ahịa Salesforce na ahịa Cloud Cloud na mmejuputa. Ná mmalite nke nchoputa anyị, anyị gosipụtara ụfọdụ isi okwu gbasara mmasị ha - nke sitere na arụmọrụ arụmọrụ. Mgbe ụlọ ọrụ ahụ mere mkpọsa, ha ga-emepụta ndepụta nke ndị nnata na mpụga ikpo okwu ahịa email ha, bulite ndepụta ahụ dị ka listi ọhụrụ, hazie email ahụ ma ziga na ndepụta ahụ.
Akọwaara Smart A ụzọ esi mee ka Nhazi Ozi Email kọwara
Wenezdee, Jenụwarị 16, 2019 Saturday, January 19, 2019 Denis Zhinko
Ndị na-ere ahịa na-ahụkarị nzi ozi email dị ka ihe ngosi maka arụmọrụ dị elu nke mkpọsa email ma jiri ya mee ihe. Mana anyị kwenyere na ụzọ amamihe dị na email ịhazi onwe gị na-enye nsonaazụ ka mma site n'echiche dị oke ọnụ ahịa. Anyị bu n'obi ka akụkọ anyị mepụta site na ezi email buru ibu na izipu ozi ịntanetị iji gosipụta etu usoro dị iche iche si arụ ọrụ dabere na ụdị email na ebumnuche email. Anyị ga-enye tiori anyị